Indlu yaseGiorgia - I-Airbnb
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguPatrizia
Indlu eqaqambileyo esandula ukulungiswa ejonge indawo yealpine yeGran Paradiso National Park, ukuze uchithe iiholide zakho kuwo onke amaxesha onyaka. Amathuba excursions kunye amawa, ukuba benze Ukuskiya cross-lizwe, iintaba ski, ice ukwenyuka, iindlela ukuhamba kunye snowshoes, ngokuthabatha uhamba phakathi ezintabeni okanye kufutshane amachibi esiluhlaza eziliqela ukuze siqonde cwaka yentaba kunye ukubonakala ngesiquphe, wesa park izilwanyana.
Indawo yokulala ikwimeko epheleleyo yeendwendwe. Imi kumgangatho wesithathu wesakhiwo esitsha esihlaziyiweyo.
ICasa Marta ibekwe ekungeneni kweCeresole Reale ephambi kwe
Iziko labatyeleli leGran Paradiso National Park. Iindlela ezinqumlayo zifumaneka nje kwiimitha ezimbalwa ukusuka eCasa Marta. Iilifti ze-ski zinokufikelelwa ngemoto. Ukusuka eCeresole kunokwenzeka ukujongana nokuhamba kuwo onke amanqanaba okhenketho kunye nohambo.
Umamkeli uhlala isiqingatha seyure ngemoto ukusuka eCasa Marta kwaye unxibelelana neendwendwe ngalo lonke ulwazi malunga nendawo yokuhlala kunye nokungena, iindwendwe ezizenzela zona. Kuyo nayiphi na imfuno, abantu abaqhagamshelwana nabo kwisiza bakwindawo yakho epheleleyo.
Umamkeli uhlala isiqingatha seyure ngemoto ukusuka eCasa Marta kwaye unxibelelana neendwendwe ngalo lonke ulwazi malunga nendawo yokuhlala kunye nokungena, iindwendwe ezizenzela zo…